Vaovao - Fahafantarana karazana volo isan-karazany
Ka inona no atao hoe lamba volon'ondry? Ny volon'ondry volom-borona dia mifamatotra, ary avy eo farafahakeliny fako iray no kosehina hamaha ny fibre ary hamorona torimaso (tampoka ambony) ho an'ny fahatsapana malefaka sy malefaka. Ho an'ny pataloha volon'ondry sy akanjo lava, amin'ny ankapobeny ny lamba ao anaty akanjo dia kosehina mba hahatsapa ho mafana sy malefaka amin'ny hoditra. Ny akanjo plush amin'ny lafiny roa amin'ny ankapobeny antsoina hoe volon'ondry dia borosina amin'ny lafiny roa.
Volon'ondry azo vita amin'ny fitaovana isan-karazany. Ny sweatshirt sy ny pataloha matetika dia vita amin'ny fifangaroana landihazo / polyester, fa ny palitao volon'ondry sy pataloha matetika dia polyester 100 isan-jato. Misy volon'ondry sy volon'olom-bolo vita amin'ny akora simika. Amin'ny farany, ny lamba volondavenona plush no manao volon'ondry fa tsy ny fitaovana namboarina avy.
Ankoatry ny fanamboarana avy amin'ny fitaovana samihafa, ny lamba "volon'ondry" dia misy hatevin'ny hateviny sy volony. Rehefa miantsena akanjo volon'ondry ianao dia hahita karazana volon'ondry maro. Ireto misy karazana volon'ondry malaza indrindra:
Ny landihazo, ny polyester ary ny polyester vita amin'ny landihazo dia mifangaro volon'ondry. Ny volon'ondry fampiasa matetika indrindra amin'ny akanjo pataloha sy akanjo lava, volon'ondry vita amin'ny landy na landihazo dia manana endrika ivelany milamina sy torimaso anatiny.
Microfleece. Ny Microfleece dia volon'ondry misy lafiny roa izay manify sy malefaka. Satria maivana ary miasa tsara amin'ny famonoana ny hamandoana hiala ny vatana, ny microfleece dia safidy malaza amin'ny akanjo fampisehoana.
Volon'ondry terry frantsay. Ny volon'ondry terry frantsay dia tsy borosina amin'ny andaniny roa, noho izany dia tsy ampy ny fofona mahazatra an'ny ankamaroan'ny volon'ondry. Manify izy io ary mipetraka fisaka kokoa noho ny volon'ondry hafa.
Volon'ondry volory. Volon'ondry volom-borona dia misy endrika mamirapiratra. Malaza eo amin'ireo marika am-balahana izy io.